Pel na-acha odo odo: ya na agba na nha. Surfacedị dị nro na agba dị mma bụ nhọrọ kachasị mma maka ịme ọla niile. Imirikiti ụdị ndị ahụ dị gburugburu, mmiri mmiri, mkpụrụ osikapa na ụdị ndị ọzọ. Enwere ike idozi ụdị ndị ọzọ. Ọnụahịa ahụ adịghị ọnụ ala ma MOQ dị ala. Ndị ahịa hụrụla ya n'anya. Ọ bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị mkpa na ụlọ ọrụ ịchọ mma.
1. Ngwaahịa ndị a na-ese. Ọ bụghị ụcha nke beads n'onwe ha. Mgbe ogologo oge gachara, ị ga-enwe ntakịrị ngbanwe mmiri ma ọ bụ daa nke mmiri n'ihi esemokwu.
2. ofdị ụdị ngwaahịa a dịkarịsịrị ala. Arefọdụ pere mpe. Biko lezie anya igbochi ụmụaka ilo. Gbalịa ka ị ghara iru ụmụaka aka.
Aha ika JC kristal
Nọmba Model JC20190117183A
Pedị ardị Peeji nke Loose Sịntetik (ụlọ nyocha mepụtara)
Ihe eji akpọrọ ihe I Peomi Pearl
Agba agba Biko rụtụ aka na kaadị agba
Ulo olu nke odo 2mm-25mm
Ihe Iko pel
Agba Iousdị mara mma, karịa agba iri isii
Nha 2mm, 3mm, 4mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 16mm
Akara Pearl Gburugburu Zuru okè
Ojiji Ngwa ngwa
Kwụ .gwọ T / T, L / C, Paypal, Western Unoin
Pedị Pearl Loose beads
Otu ngwungwu otu: 40X30X20 cm
Otu nnukwu ibu: 1.600 n'arọ
Roads Beads na Rondelles bụ ihe ndị achọrọ nke nwere oghere. A na-enyerịrị onyinye kacha mma na ahịrị ụdị bead na-atọ ụtọ nke enwere ike ijikọ ọnụ n'ọtụtụ ọdịiche. Enwere ike iji beads kristal anyị maka imepụta ọla ndị eji achọ mma na ihe ndị ọzọ na-ewu ewu dịka ngwa, ihe ịchọ mma, akwa mkpuchi wdg.
eji ya na uwe na ihe nchoputa ihe eji achọ mma, ihe eji achọ ogho emere, ihe ndozi ulo na ichoro ihe omume ndi ozo.
Nke gara aga: Mkpụrụ osisi bekee juputara nke ọma na MIYUKI delica beads 11/0 maka ịkpụzi ọla
Osote: Mgbaaka mara mma dị larịị azụ kristal na-abụghị ihe ndozi ntu ntu nka
Kpụrụkpụrụ Ọla na Pearls
Iko Pearl Glass
Bear Pearl beads
Ezi Pearl Beads